Saaxiibka wanaagsan Adam Small wuxuu leeyahay a madal suuq geynta qoraalka taasi waxay u aragtaa qiimaha madax furashada cajiibka ah ee ku saabsan soo jeedinta qoraalka SMS. Hal farsamo ayuu ii sheegay oo ku saabsan macmiilkaas oo bixiyay a keen saaxiib ku siiso meeshii aad ka heshay gariir bilaash ah markaad saaxiib u keentay dhismaha. Waxay diri lahaayeen qoraalka nus saac kahor qadada waxaana jiri lahaa khad albaabka ka baxa. Waa fikrad aad u fiican maxaa yeelay kaliya ma bartilmaameedsanaysid qof ku boodaya sicir-dhimista, waxaad helaysaa ilaaliye cusub oo isku dayaya inuu cuntadaada tijaabiyo!
Cabir Natiijooyinka - Markasta oo dallacsiin kasta ay gaarto taariikhda uu dhacayo, fiiri waxa shaqeynaya iyo wixii aan shaqeynin oo u roonow ololahaaga soo socda.